Ciidamada xoogga dalka iyo kuwa AMISOM oo qarka u saran Aadan Yabaal – Qaranimo Online
You are here: Home 2016 April 6 Ciidamada xoogga dalka iyo kuwa AMISOM oo qarka u saran Aadan Yabaal
Ciidamada xoogga dalka iyo kuwa AMISOM oo qarka u saran Aadan Yabaal
Posted on April 6, 2016 by Ali Omar Ghedi | 0 Comments
Muqdisho, April 6, 2016: Ciidan ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay wehliyaan kuwa Nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM ayaa qarka u saran inay la wareegaan degmada Aadan Yabaal, kadib markii ay halkaasi isaga carareen maleeshiyada Al-Shabaab.
Maxamuud Sheekh Xasan Guddoomiyaha degmada Aadan Yabaal, oo la hadlay Wakaaladda SONNA ayaa sheegay in ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay kaabiga ku hayaan degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabellada Dhexe, waxaana ay ciidamada iminka howlgallo ka wadaan nawaaxiga degmada, si looga hortago dhagarta ay maleegayaan Al-Shabaab.
Tan iyo markii ciidamada xoogga dalka ay bilaabeen howlgalo ka dhan ah haraadiga Al-Shabaab waxaa isa soo tarayay qasaaraha loo geysanayo firxadka Shabaab, iyadoo dhawaan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay lix ka tirsan horjoogayaasha Al-Shabaab ku dileen Janaale iyo leego oo ka wada tirsan gobolka Shabeelaha Hoose, kuwaasi oo labo ka mid ah ay ahaayeen ajaanib u kala dhalatay dalalka Keny iyo Yamen.
10 Countries With the Highest Proportion of Women in Parliament December 18, 2015
Madaxweynaha Dalka Oo Ku Wajahan Masar August 20, 2017
Cabdi Qaybdiid: ”Soomaaliya marxalad adag bay mareysaa, yaa samata bixin kara?” January 6, 2017
Dilalka ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika oo dib u soo cusboonaatay October 4, 2015
Shir Looga Hadlayey Tayeeynta Hay’adaha Dowladda oo Lagu Qabtay Magaalada Muqdihso April 19, 2017
Passenger who went missing at Wajir Airport while in transit yet to be traced January 23, 2017
Xildhibaano saxiixay mooshin ka dhan ah Madaxweyne Hir-Shabelle August 14, 2017
Shir Maanta Lagu Wado Inuu Kafurmo Jowhar July 30, 2017